Posted on फ्रेवुअरी 9, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
गत महिना नेपाल विधुत् प्राधिकरणले ५ सय ६ निम्न र मध्यमस्तरका कर्मचारीहरूका लागि आवेदन आह्वान गर्दा एक लाखभन्दा धेरै आवेदन परे । यसबाट देशमा युवा बेरोजगारीको अवस्था मात्रै झल्किँदैन, निरन्तर रूपमा द्वन्द्व चलिरहेको पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै सरकारी आँकडा अनुसार छ महिनाको अवधिमा सवा लाख नेपाली युवा रोजगारका लागि विदेशिएका छन् । विश्वका कुनै पनि देशमा भन्दा नेपालका युवाहरूलाई जीवन अगाडि बढाउन ठूलो संघर्ष गर्नु पररिहेको माथिका उदाहरणहरूबाट प्रस्ट छ । यस्तो गम्भीर विषयप्रति यहाँका उच्च प्रशासक, नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरू संवेदनाशून्य अवस्थामा रहनु उदेकलाग्दो कुरा छ ।
निर्वाचनका बेला राजनीतिज्ञहरू गाउँघर तथा सहरका युवाहरूलाई रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी परचिालन गर्छन्, भोट माग्छन् । निर्वाचनपछि धेरै उपेक्षित हुँदा पार्टीका नेताहरू जनताबाट तिरस्कृत हुन्छन् । यस्तै कारणले केही अपवादबाहेक धेरैजसो राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका राजनीतिज्ञहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा दोस्रो र तेस्रोपटकको निर्वाचन लड्न जाँदा तिनै युवाको आक्रोशको सामना गर्न पुग्छन् र पराजय भोग्छन् । यस्तो चक्रकै कारण नेपालमा नयाँ-नयाँ नेता र नयाँ पार्टी तीव्र गतिमा स्थापित हुने र पुराना पार्टी र तिनका नेताहरू विस्थापित हुने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै नेकपा एमालेबाट सुरु भएको घर-घडेरी र सबैलाई रोजगार दिने उधारो आश्वासनलाई यस्तो हुनुको प्रमुख कारण मानिन्छ । राजनीतिक परविर्तन जस्तै जनतालाई रातारात वैभव र सम्पन्नताको सपना बाँडेर भोटको राजनीति गर्ने चलन नेपालमा एमालेबाटै सुरु भएको हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै २० वर्ष अगाडि सुरु भएको राजनीतिक कुसंस्कारकोे पृष्ठभूमिमा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक जग खडा गरेको हो ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा बचत भएको ग्रामीण युवा समुदायको गतिविधिले नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा तीव्र दबाब छ । नेपालका सहरहरूमा मात्र होइन, समुद्रपारसिम्म यो समूहको चलखेलले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा स्थापित पुराना मान्यताहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ । ’cause, युवाहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा अस्िथरताको कारक हुन जान्छन् ।
२२ वर्षे ओम राजवंशी मोरङको बुधनगर गाविस-३ बाट एक वर्षअगाडि रोजगारको खोजीमा काठमाडौँ आए । काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा गाउँले साथीहरूले चलाएको काठको कारखाना उनको आश्रयस्थल भएको छ । सम्पत्तिको नाममा उनीसँग पैतृक अंशबन्डाबाट पाएको गाउँको एक कट्ठा जग्गा छ, जसको मूल्य १० हजार रुपियाँ पनि छैन । त्यहाँ पनि उनले विवाह गर्ने उमेरकी बहिनी छाडी आएका छन् । काठमाडौँको पुसको जाडोमा राती अबेरसम्म बसेर उनले खरपिाटीस्िथत विद्युत् प्राधिकरणमा आदिवासीको कोटामा जागिरको आवेदन दिए । नेपालको असंवेदनशील कर्मचारीतन्त्रले शून्य आयका बेरोजगारलाई खरपिाटीको खुला चौरमा पुर्‍याउँदा त्यहाँ भोगेको दुर्दशाको बयान यतिखेर ओम राजवंशी यत्रतत्र सुनाउँदै हिँड्न बाध्य छन् । पंक्तिबद्ध भएर घन्टौँ लाइनमा बस्ने हजारौँ युवाहरूबीच उनले देशको राजनीतिको कुरा सुने अनि कहिल्यै सर्वसाधारणप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने कर्मचारी-तन्त्रको कुरा बुझे । त्यहाँ कैयन् युवाहरूलाई नयाँ राजनीतिक धारमा लाग्न आग्रह गरएिको पनि उनले देखे । सबै बेरोजगार युवाहरूले यो राज्यबाट न्याय हुँदैन भनेको सुन्दा उनी तीनछक्क परी मध्यरातमा पैदल डेरा फर्किए । विचरा ओम राजवंशीले विश्वब्यांकले हालसालै ‘गरबिको सम्पत्तिमा वृद्धि गर अनि मात्र गरबिी हट्छ’ भनी नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव’bout सुन्न त परै जाओस्, अंग्रेजीमा लेखिएका यस्ता ठेली उनले देखेकासम्म पनि छैनन् ।
ओम राजवंशीजस्तै कामकै खोजीमा भारत पस्ने फाटेको टोपी लगाएका नेपालीहरूको झुन्ड देख्दा आजभन्दा ७० वर्षअगाडि कृष्णप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन राणाशासक चन्द्रशमशेरविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । आज पनि नेपाल र नेपालीकोे मूल मुद्दा कृष्णप्रसाद कोइरालाले उठाएको ठाउँबाट रत्तिभर अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । सात दशकअगाडि राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध उठेको विद्रोह विभिन्न रूप र रङमा अद्यापि कायम छ । यस अवधिमा विभिन्न शासन र शासकहरू आए पनि नेपाल राज्यको वर्ग चरत्रि फेरएिन । त्यही नफेरएिकै कारण अहिले नेपालमा विभिन्न जातीय राष्ट्र निर्माणको दबाब आएको हो । ’cause, इतिहासको गति नेपालमा मात्र पृथक् मार्गमा हिँड्न सम्भव छैन । अहिलेको युग पहिचान, अधिकार र अवसरमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हिँडेको छ ।
« जमिमको हत्या अन्तरराष्ट्रिय अपराधि छोटा राजन समुहबाट गरिएको प्रहरी निष्कर्ष सरकार फेर्न कांग्रेसमा दवाब »